Download မ န ဇ တ က ဝ ည ဉ ကက အ င ရ လင သင ဝင ရတ Myanmar Movies Love Drama Video Full Hd - Netflix.com-g.best
မြန်မာဇာတ်ကား - ဝိညာဉ်ကကြိုး - အောင်ရဲလင်း ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ ရွှေမှုံရတီ- Myanmar Movies Love Drama
Mahar349.300 x views
Description Of Download မ န ဇ တ က ဝ ည ဉ ကက အ င ရ လင သင ဝင ရတ Myanmar Movies Love Drama Video Full Hd
ျမန္မာဇာတ္ကား - ဝိညာဥ္ကႀကိဳး - ေအာင္ရဲလင္း ၊ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ၊ ေ႐ႊမႈံရတီ - Myanmar Movies - Love - Drama
မြန်မာဗီဒီယို မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD Quality ဖြင့်
မပျက်မကွက်ကြည့်ရအောင် Mahar ကို Subscribe လုပ်ထားကြပါ။
မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD Quality ဖြင့်
Myanmar Movies with HD Quality
Please subscribe to Mahar to keep up to date.
* Mobile app ဒေါင်းရန်
မဟာ အပလီကေးရှင်းကို ဖုန်းမှာ install လုပ်ပြီး
* Mahar social network
Mahar is the distributor of DVD, online & offline channel, authorized IP agent of Movie production, Mahar TV Channel for TV audiences, Mahar App for mobile audiences, Mahar YouTube online Media for online audiences and Mahar & Mahar mobile Facebook Social Media for social network.
ABC Content Solutions သည်ဒီဗီဒီ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းချန်နယ်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏တရားဝင်အိုင်ဒီကိုယ်စားလှယ်၊ တီဗီပရိသတ်များအတွက် Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar အက်ပလီကေးရှင်း၊ အွန်လိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar YouTube Online Media နှင့် Mahar & Mahar မိုဘိုင်း Facebook လူမှုမီဒီယာ လူမှုကွန်ယက်။
ABC Content Solutions သည္ဒီဗီဒီ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ေအာ့ဖ္လိုင္းခ်န္နယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး၏တရားဝင္အိုင္ဒီကိုယ္စားလွယ္၊ တီဗီပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar အက္ပလီေကးရွင္း၊ အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar YouTube Online Media ႏွင့္ Mahar & Mahar မိုဘိုင္း Facebook လူမႈမီဒီယာ လူမႈကြန္ယက္။
We investedalot in movie contents and launched biggest movie library is available only in Mahar. Mahar targets to diverse user groups. From our experience on YouTube channel, Myanmar hasahuge movie fan locally. Mahar had previous launched an App in Play Store for over4years. And launchedanew version recently for Myanmar market. We expected to maintain 5,000 over movie library for our users.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ရှင်များစွာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး အကြီးမားဆုံး မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဘဏ်တိုက်ကိုမဟာ တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။ Mahar သည် မတူညီသော ရုပ်ရှင် နှစ်သက်သူ အုပ်စုများကို တင်ဆက် ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ယူကျု့ချန်နယ်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံများအရမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေသတွင်းရုပ်ရှင်ပရိသတ်များစွာရရှိထားသည်။ Mahar သည် Play Store တွင် အပလီကေးရှင်းကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ ၄ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်အတွက် ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mahar also cooperates with local mobile operators such as MPT, telenor, Ooredoo, MyTel, as well as other internet services such as Ananda and Myanmar Net.
မဟာသည် ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများဖြစ်သည့် MPT, telenor, Ooredoo, MyTel အစရှိသည်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အခြား အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Ananda, Myanmar Net တို့နှင့်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မဟာသည္ ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ MPT, telenor, Ooredoo, MyTel အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျပင္ အျခား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Ananda, Myanmar Net တို႔ႏွင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
We are also partnering with banks such as ABC Pay, AYA Pay.
ABC Pay, AYA Pay အစရှိသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့်လည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ABC Pay, AYA Pay အစရွိသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။
You can also watch the movies of many actors, such as Nay Toe, Myint Myat, Pyay T Oo, Lu Min, Kyaw Ye Aung, Nay Min, Ye Tike, Nay Dway, Kyaw Thu, Yan Aung, Ye Aung, Kaung Pyae, Kaung Khant, Nay Htoo Naing, Nay Htet Linn, June Ko and also watch Eain Dra Kyaw Zin, Thet Mon Myint, Khine Thin Kyi, Wut Moan Shwe Yee, Phway Phway, Shwe Moan Yati, Shwe Ta Mee, Yadanar Bo, Chuu Lay.
နေတိုး၊ မြင့်မြတ်၊ ပြေတီဦး၊ လူမင်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ နေမင်း၊ ရဲတိုက်၊ နေဒွေး၊ ကျော်သူ၊ ရန်အောင်၊ ရဲအောင်၊ ကောင်းပြည့်၊ ကောင်းခန့်၊ နေထူးနိုင်၊ နေထက်လင်း၊ ဂျွန်ဂို အစရှိသည့် မင်းသားများစွာ၏ ဇာတ်ကားများလည်း ကြည့်ရှုနိုင်သလို အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ သက်မွန်မြင့်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ ဖွေးဖွေး၊ ရွှေမှုန်ရတီ၊ ရွှေသမီး၊ ရတနာဗို၊ ခြူးလေး အစရှိသည့် နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ် ဇာတ်ကားကောင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Action, Drama, Love, Youth films are being presented.
အက်ရှင်၊ ဒရာမာ၊ အချစ်၊ လူငယ် ဇာတ်ကားများစွာကိုလည်း တင်ဆက်နေပါသည်။
အက္ရွင္၊ ဒရာမာ၊ အခ်စ္၊ လူငယ္ ဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုလည္း တင္ဆက္ေနပါသည္။
Myanmar Video - Wuitt Nyin Ka Kyoe - Aung Ye Linn , Thinzar Wint Kyaw , Shwe Hmone Yati - Love - Drama - Romance
® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.
Next Related Videos:
331.858 x views
876.777 x views
84.119 x views
ချူစားမယ် - အော�...
58.472 x views
1.796.556 x views
Shwe Sin Oo motion picture
1.104.528 x views
106.188 x views
584.120 x views
394.402 x views
12.867 x views
Download မ န ဇ တ က ဝ ည ဉ ကက အ င ရ လင သင ဝင ရတ Myanmar Movies Love Drama Video Full Hd